Kunzima ukuthola izwe angathathwa ukuphishekela yizinguquko kwezomnotho, baphendukele usebenzisa zangaphandle ngezimali imithombo. Ukuzisebenzisa kahle imali angaphandle nokubonga ukusheshisa ukuthuthukiswa komnotho, ukuxazulula ezinye izinkinga zezenhlalo kanye nezomnotho.
Umqondo debt umphakathi
Izwe ngalinye has a izinga elithile izindleko, futhi lapho bebodwa abakwazi kumele yentiwe, kukhona ukungeneli kwesabelo sezimali. Kule ndaba, kukhona isidingo ukuheha izimali ezengeziwe, okuyinto ndawonye bakha isikweletu sezwe. Libhekisela zonke izinhlobo izibopho izikweletu we Russian Federation, esadaleka eminyakeni embalwa edlule, noma ngaphambi nje kokuba yalezi nezinye abakweletwayo ngalesi simo. Lokhu kuhlanganisa isibopho ukuhlinzeka uhulumeni iziqinisekiso we Russian Federation, obonakaliswe yendawo (ruble). izikweletu Izikhungo uhulumeni okuboniswe ukukhokhelwa uthishanhloko kanye isithakazelo kuyo. Ngamagama alula, the debt umphakathi - lena ukubaluleka ukuthi isimo kufanele zonke abakweletwayo yayo.
Okwamanje, kunezinhlobo ngeengaba eziningana izikweletu kahulumeni. On omunye wabo ukwaba isimo izikweletu ezifuywayo angaphandle.
State izikweletu sangaphakathi Russian Federation - wukuthi ingxenye yesikweletu esikhulu, ezilandisa loans yangaphakathi kanye nezinye izibopho ngezikweletu ukuze abakweletwayo umhlali. izikweletu ezinjalo kubhekwa njengendlela libolekwe labantu uqobo. Kulokhu, it akuphazamisi ubukhulu ingqikithi ngomnotho ingqikithi isizwe. Kufanele kuqashelwe ukuthi izikweletu zomphakathi basekhaya ngaphezulu umthetho emnothweni, kunokuba ngaphandle. Ukuba khona kwawo kokuba ejwayelekile, ngaphandle uma kuba nenani eliphezulu kakhulu. Okuningi ngokunembile, isikweletu sangaphakathi Russian Federation siqukethe lokhu okulandelayo: lemali ngokulinganisa of Zezibambiso we Russian Federation, ivolumu esikweletini esiyinhloko ukuthi ubhekene nenkinga yezimali etholwe WaseRussia, ivolumu esikweletini esiyinhloko ku credits kwesabelomali kanye loans, eyayibonakala etholwe isimo kwamanye amazinga amabhajethi, kanye umthamo izibopho Russian ku izibopho isimo, uma ngokwalo.
izikweletu zomphakathi sangaphandle Russia - ingxenye of the debt umphakathi, elibhekene nomse- ukubolekisa zangaphandle kanye nezinye izikweletu Russian Federation abakweletwayo we non-ohlala. izikweletu sangaphandle kuhlanganisa neembopho Uhulumeni waseRussia, anikezwe zezimali angaphandle. Iqiniso lokuthi Russia has a izikweletu angaphandle - liphinde ejwayelekile, hhayi kuphela ngoba bakhe kuphela kodwa nangenxa namanye amazwe. Nokho, kunemingcele, becabangela okungale kwalokho ukuthi, isikweletu zangaphandle zomphakathi isiba anobungozi. Inani elikhulu ukubolekisa angaphandle kungaholela yokuthi izwe kuzoncika ngemali. International Bank for neKwakha kaBusha nekuTfutfukisa libabiza izikweletu zangaphandle kanje: izinga eliphansi ke kufanele okungenani u-18% maqondana nokuthengiswa kwezimpahla nezinsiza, ngokulinganisela - 18-30%. Ngakho, amazinga aphakeme basongela ukuthuthukiswa komnotho kanye nesimo iyonke.
State izikweletu basekhaya nabamazwe angaphandle kuwuphawu ukusebenza wokuthenga ngesikweletu ezenziwa nguhulumende. Dynamics zayo, ubukhulu kanye izinga loshintsho kuveza isimo umnotho kanye neluhlelo lwetimali, kanye nendlela lwekhompuyutha olusebenza kahle isakhiwo isimo.
Ngakho, isimo izikweletu basekhaya nabamazwe angaphandle iyisici evamile ukuthuthukiswa zanamuhla Russian Federation. Wavele idinga ukuthi uma ungenayo izimali imboni entsha, noma uma kudingekile njengoba umnotho ngesimo sabo esibucayi ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuba ahoxe.
Zezibani: inhlanganisela sokuhlaziya, izici zohlelo lokusebenza, izinhlobo
Ukuhlaziywa kwe-range yomkhiqizo
Izakhiwo awusizo kumquat: uyisithelo esiyisimanga
Kakhulu ezimbi ukulimala e-hockey umlando